War deg deg ah: 3 qof oo mid ka mid ahaa ganacsade oo caawa lagu diley Bosaso – SBC
War deg deg ah: 3 qof oo mid ka mid ahaa ganacsade oo caawa lagu diley Bosaso
Dilal loo geystey sadex qof oo rayid ah oo mid ka mid uu ahaa ganacsade caan ka ah gobolka ayaa caawa ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Dilalkan ayaa kii ugu horeeyey waxaa lagu diley Ganacsade Siciid Shire Walbaq oo ka mid ah ganacsatada caanka ah ee gobolka Bari iyadoo wararku sheegayaan in la dilay isagoo ka soo baxayey masjid uu ku tukuday marxuumku salaadii maqrib.
Mudo ka dib ayaa laba nin oo kale oo rayid ahaa ayaa lagu diley magaalada Boosaso lama ogona sababaha dilalkan iyo in ay xiriir leeyihiin dilalkan caawa ka dhacay magaalada Boosaaso.
Ma jiro wax war ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxay maamulka Gobolka & kan sare oo la xiriira dilalkan caawa ka dhacay Boosaaso, waxaase dilalkan ay ku soo aadayaan iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyey magaaalda ay taagnaayeen falal amaan xumo oo lagu beegsanayey dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan iyo waliba dadka bulshada ka dhex muuqda.
Ciidamada amaanka ayaa wada hawlgalo amaanka la xiriira oo dilka dhacay ka dib, waxaana la arkayaa ciidamo dhex soconaya wadooyinka magaalada.
gaboose abdi gas says:
allaha ha naxariisto marxuumiinta la dilay
allaha janada ha geeyo
,,dadkii falkaas geystana wax xun iyo dhiig bey geysteen allaha arkaya ayaa u jeeta kana abaal marinayaa maalin cad insha allah..
wa wax laga xumado falalkan kuso badanaya deeganada nabada caanka ku ahaa. Waa in mamulku gacanta kuso dhiga cida ka damaysa. Weliba si gaara waxan aminsanahay in koxda atom laga takhalusa, waana in atam cadaalada la hor ken si umadu waxqabadka dawlada u hayso u arkan.
horta markaa madaxweynuhu yimaado bosaso maxay dilalku u bataan ma lays orankaraa madaxweynaha ka danbeeya si uu daadka u argagixiyo khasab madax weynaha iyo alshaydaan iyo ashahaado la dirirka baa ka danbeeya waxaan ka dhacaya bosaso mey ka dhacaan garoowe hadii aan siyaasad hoose jirin meesha
waa wax laga xumaado haddii dadkii rayidka ahaa suuqa lagu dilayo
waxaana leenahay ciddii dhimataya alaha unaxariisto
Waxaan ka xumahay sida khaldan ee indha la’aanta ah ee aad warka u soo gudbineysaan.waxaa ugu horeyn la dilay nin dhalinyaro ahy ina aw cismaan,waxaa dilay cali jibraahiil saacad ka dib ayaa shire loogu aaray.
labaddii anabadoon ee ka horeeyay Siciid kaashawiito iyo Salah faqash waxaa dilay Cismaan maxamuud waxayna ugu aareen Askartii burcadbadeedu ku leysay Bayla.
marka sidaas umaddu ha ula socoto sidii ay u aarsan lahaayeen qolada wax ka maqanyihiin halaga war sugo.
inaa lilaahi wa inaa ilahyhi raajicuun , ilaahay ha u naxaristo ganacsade shire walbaq iyo dadka kale ee bosaso lagu laayay ,
Warkii run ah wey idnku adagtahay inaad postgareysaan.
waxaad ogaataan in baaritaankii noo dhameystiranyahay.
Siciid kaashawiito iyo Nabadoon Salah Faqash waxaa dilay cismaan maxamuud,waxaana loo dilay Askartii ay Burcad badeedu ka dishay Puntland oo isku beel ahaa.Waxaa xigu doona Muuse Cali Jaamac,C/siciid,EngCabaas.Ina Cali qood.
inaa llilahi wa ina ilahayi rajicuun
eebe naxariistii jano ha siiyo aduumadiisa gacanta ka xaqdaran dishay
maamulka puntland waxa la gudbuun in ay dadkaa gacanta ku soo dhigan
oo ay waliba cadalada hor keenaan cid alle iyo cidii lug ku leh
amanka puntland khatarbaa kuu soo foolyeelatay
war ha ladadalo
alla haxariisto intii dhimatay samir iyo iimaana haka siiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen,,,lakin waxaa layaab leh puntland masaanaa u dambaysay maalin walba dad ayaa lagu dilayaa aaway nabadii aan somalida kale kaga duwanayn ee umadu inagu soo hiranjirtay maanta ma inagaa dib isu cunayn ma nabadoonadeena iyo wax garadkeena ayaan ugaadhsanaynaa!!!!!!!!!!